Ignacio Sala | 22/09/2021 18:00 | လဲ tutorial
သင်ဤဆောင်းပါးကိုရောက်ပြီဆိုလျှင်၎င်းသည်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည် မင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပိတ်ထားတယ် သင်ဆက်သွယ်လိုသောလူအားဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်အားအပိတ်ခံထားရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုအလွန်တန်ဖိုးထားနိုင်ပြီးဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်လူမှုကွန်ယက်များသုံးသောတူညီချက်များကိုအခြေခံထားသည်ထက်ဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါသည်။
ဒါပေမဲ့ ငါတို့ကိုပိတ်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုငါတို့ဘယ်လိုခေါ်နိုင်မလဲ။ လူမှုကွန်ရက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုရှောင်ကွင်းရန်နှင့်သုံးစွဲသူတစ် ဦး နှင့်အဆက်အသွယ်ရရန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းကိုအပိတ်ခံရသောအခါ၎င်းကိုကျော်လွှားရန်လှည့်ကွက်များလည်းရှိသည်။
1.1 iPhone တွင်ဝှက်ထားသောနံပါတ်များဖြင့်ခေါ်ဆိုနည်း
1.2 Android တွင်ဝှက်ထားသောနံပါတ်များနှင့်ခေါ်ဆိုနည်း
2 SMS ကိုပို့ပါ
3 WhatsApp မှတဆင့်
6 Android မှာဖုန်းနံပါတ်ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
7 iPhone နံပါတ်တစ်ခုကိုဘယ်လိုပိတ်ဆို့မလဲ
ငါတို့ခေါ်ချင်တဲ့သူကသူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းရဲ့ black list မှာငါတို့နံပါတ်ထည့်ခဲ့ရင်ငါတို့ဘယ်နှစ်ကြိမ်ခေါ်လဲအရေးမကြီးပါဘူး။ ငါတို့ရဲ့ခေါ်ဆိုမှုတွေကဘယ်တော့မှမမြည်ဘူး ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ခံသူ၏စမတ်ဖုန်းတွင် ငါတို့မင်းရဲ့စမတ်ဖုန်းကိုခေါ်ဖို့ငါတို့လုပ်နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကငါတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းဘဲ။
ပြဿနာကလူအများကြီး ဝှက်ထားသောနံပါတ်များမှခေါ်ဆိုမှုများကိုမဖြေပါနှင့်နာမည်ဖော်ပြသည့်အတိုင်း၎င်းတို့သည်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဝှက်ထားကြသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကစျေး ၀ ယ်ကုမ္ပဏီများသုံးသောဖုံးနံပါတ်များ၊ ဖုံးနံပါတ်များမှခေါ်ဆိုမှုများလက်ခံရရှိရန်အတော်လေးအသုံး ၀ င်ခဲ့သည်။
iOS သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုဝှက်ရန်ခွင့်ပြုသည် Settings menu မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သောခေါ်ဆိုမှုတိုင်းတွင်အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်း၊
ပထမ၊ setting များကို ကိရိယာ၏။
Settings menu အတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ထို option ကိုရယူသည် ဖုန်းကို.
ဖုန်းမီနူးတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ Caller ID ပြပါ.
ဇာတိအားဖြင့် Show Caller ID ခလုတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုသည့်အခါတိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုဖော်ပြခွင့်ပြုသည်။ ငါတို့ခေါ်ဆိုမှုတွေအားလုံးမှာငါတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ငါတို့လုပ်ရမယ် switch ကို disable.
iOS ကဲ့သို့ Android၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုဝှက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည် USSD ကုဒ်များကိုနံပါတ်ရှေ့တွင်မထည့်ဘဲငါတို့ခေါ်သောခေါ်ဆိုမှုများအတွက် (နောက်အပိုင်း၌ရှင်းပြမည်) ။
မသန်စွမ်း ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုံးကွယ်ထား ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းနံပါတ်မှကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုမှုများအားလုံးတွင်အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့အပလီကေးရှင်းကို ၀ င်ရောက်ဖို့ပါ ဖုန်းကို.
ခေါ်ဆိုသည့်အပလီကေးရှင်းအတွင်းတွင်အချက် ၃ ချက်ဖြင့်ဖော်ပြထားသောဆက်တင်များကိုနှိပ်ပါ၊ အပိုဆက်တင်များကိုရွေးပါ။
အပိုဆောင်းဆက်တင်များအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သည် ID ခေါ်ရန်နှင့်နံပါတ်ဖျောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အမှတ်အသားလုပ်ပါ။
အမြန်ကုဒ်များ (သို့) USSD function ကုဒ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တယ်လီဖုန်းလိုင်း၏ခေါ်ဆိုမှုကိုလွှဲပြောင်းရန်၊ အဖြေပေးစက်သို့ခေါ်ဆိုမှုများပို့ခြင်း၊ ချိန်ခွင်ကိုသိစေသည်။ ဒါပေမယ့်လည်း ငါတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုဖုံးကွယ်ခွင့်ပြုပါ ငါတို့ဖုန်းခေါ်တဲ့အခါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုံးကွယ်ရန်ခေါ်လိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖုန်းအပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ရပါမည် ငါတို့ * 31 # ခေါ်ချင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအရင်ထည့်ပါ။မရ။ * 31 # နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကြားနေရာမရှိပါ။
ငါတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းအားဖြင့်ငါတို့မဆက်သွယ်နိုင်ရင်ငါတို့မှာရှိနေတဲ့ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုကတဆင့်ပဲ SMS ပို့ပါမရ။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းပေါ်မှခေါ်ဆိုမှုများကိုပိတ်ပင်ရန်ခွင့်ပြုထားသောအပလီကေးရှင်းများသည်စာတိုမက်ဆေ့ခ်ျများအလိုအလျောက်မပိတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြောဆိုဆက်သွယ်သူသည်ဤဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမပိတ်ဆို့နိုင်ခဲ့ပေ။
ဤ SMS ၌သင်၌မဲအားလုံးအစရှိသည် ပြန်ကြားချက်မရရှိပါငါတို့ရဲ့အဖော်ကိုငါတို့ကိုပြန်ဖွင့်ဖို့စည်းရုံးဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြရမယ်။
WhatsApp သည် iOS (သို့) Android တွင်မပါ ၀ င်သောပြင်ပ application တစ်ခုဖြစ်သည် စနစ်ထဲသို့ပေါင်းစည်းမထားပါမရ။ ဤနည်းအားဖြင့်သုံးစွဲသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းမှခေါ်ဆိုမှုများမရစေရန် system ၌ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုပိတ်ဆို့သောအခါဤအပိတ်သည်အခြားအပလီကေးရှင်းများသို့မချဲ့ပါ။
ငါတို့ကိုတားထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဆက်သွယ်ဖို့ငါတို့မှာနောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိတယ် မက်ဆေ့ (သို့) WhatsApp မှတဆင့်ခေါ်ဆိုပါမရ။ သူကမင်းကို WhatsApp မှာပိတ်ထားရင်မင်းသူ့ကိုဆက်သွယ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ကတခြားရွေးစရာတွေကိုဆက်ရှာနေရလိမ့်မယ်။
သူတို့ကဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းတွေနဲ့ငါတို့ကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနည်းလမ်းတွေကငါတို့ကိုပြန်ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးရင်ကျန်နေသေးတဲ့တစ်ခုတည်းသောဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းလမ်းက social media ကိုသုံးပါသူတို့ကငါတို့ကိုပိတ်ဆို့နေသရွေ့
သင်သည်ဤပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ချစ်ကြည်ရေးပြန်လည်စတင်ရန်အထူးစိတ်ပါဝင်စားလျှင်၎င်းသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ချန်နယ်များကမျှော်လင့်ထားသောရလဒ်ကိုမပေးချေ၊ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပလက်ဖောင်းများနှင့်လူမှုကွန်ယက်များအားလုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပိတ်ဆို့ထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကျန်ရစ်သောတစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။ သင်တို့နှစ် ဦး ကြားဆုတောင်းပေးရန်အပြန်အလှန်အသိမိတ်ဆွေတစ် ဦး နှင့်စကားပြောပါ။
Android တွင်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုပိတ်ဆို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်သင်ပြထားသောအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ မိုဘိုင်းလ်တစ်ခုစီပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်စရာများ၏အမည်ကွဲပြားနိုင်သည်Android ၏စိတ်ကြိုက်အလွှာများကြောင့်ဖြစ်လေ့ရှိသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့လျှောက်လွှာကိုဖွင့်လိုက်ပါ ဖုန်းကို ငါတို့သည်မကြာသေးမီခေါ်ဆိုမှုများစာရင်းကိုရယူသည်။
ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပိတ်လိုသောနံပါတ်ပေါ်တွင်ကလစ် နှိပ်၍ ရွေးချယ်မှုကိုရွေးပါ Spam အဖြစ် Block သို့မဟုတ်အမှတ်အသားလုပ်ပါ။
ငါတို့မသိသောဖုန်းနံပါတ်များမှခေါ်ဆိုမှုအားလုံးကိုပိတ်လိုလျှင်၊ Phone application ကိုသုံးရမည်၊ ဒေါင်လိုက်အစက်သုံးစက်ကိုနှိပ်ပါ၊ ဆက်တင်များ> ပိတ်ထားသောနံပါတ်များ ပြီးတော့ငါတို့က Unknown option ကိုရွေးတယ်။
ငါတို့က iPhone ကိုထပ်ပြီးအနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင်ငါတို့က iPhone ပေါ်ကဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို block ချင်ရင်ငါတို့ကအောက်ပါအတိုင်းဆက်လုပ်မယ်။
ပိတ်ဆို့ရန်ဖုန်းနံပါတ်၏ညာဘက်ရှိ i ကိုနှိပ်ပါ၊ ထို့နောက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ အဆက်အသွယ်ကိုပိတ်ထားပါ။
iOS သည်ကျွန်ုပ်တို့အားခေါ်သောအမည်မသိဖုန်းနံပါတ်များအားလုံးကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကိုမီနူးမှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည် ဆက်တင်များ> ဖုန်း> သူစိမ်းတိတ်ဆိတ်စွာနေပါမရ။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအသက်သွင်းတဲ့အခါဖုန်းစာအုပ်ထဲမှာငါတို့သိမ်းထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေသာမြည်လိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လဲ tutorial » ငါ့ကိုပိတ်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ
Clash Royale အကောင့်တစ်ခုပြန်လည်ရယူနည်း
Geforce Experience အမှား 0x0003 ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ